Unokubeka njani i-Amazon kwiindawo eziphambili ezifanelekileyo?
Ukuba ufuna ukwazi ukubeka i-Amazon kwi-intanethi malunga neenkcukacha eziphezulu ezifanelekileyo-sele usendaweni efanelekileyo. Ngaba uyazi ukuba iphepha lokuqala lemiphumela yophando kwi-Amazon ithola ngaphezu kwe-60% yendlela yokukhangela jikelele evela kubathengi abaphilayo befuna izinto ezithengiswa ngaphaya kwalapho? Ngoko, kuthetha ukuba ukufuphi kwakho kufikelele kwi-Amazon yomkhiqizo wokukhangela amagama angundoqo afanelekileyo kunye nemigca yokukhangela emide.Kodwa indlela yokubeka i-Amazon kwiindawo eziphambili ezifanelekileyo, ngokukodwa ukuba usengomthengisi we-novice nje nje uthatha amanyathelo okuqala kuloo ndawo yemakethe ephakamileyo? Impendulo emfutshane kukuba - ukuqonda amagama angundoqo kunye neempawu zabo eziphambili ezibonwe kwimbono ye-A9 yokusesha i-algorithm - queen bee talk. Ngoko, ngaphantsi ndiza kukubonisa indlela yokubeka i-Amazon kwibala - ngokunika isikhokelo esifutshane kwizinto eziphambili ezijoliswe kuzo kunye nendlela efanelekileyo yokuzichonga apho.
Indlela yokubeka i-Amazon kwiindawo eziphambili ezichaphazelekayo
Ngaphambi kokuba nantoni na enye, makhe sicinge ngokusingatha uphando lwegama elingundoqo le-Amazon ngendlela efanelekileyo. Khumbula, yenza isiseko esisiseko sokwenza kwakho kwi-Amazon. Nazi ezinye iimpawu ezisisiseko kunye neenkcazo ukuba uqonde indlela yokubeka i-Amazon kwiindawo eziphambili ezijoliswe kuzo. Qinisekisa ukuba unabo bonke:
Amagama angundoqo - ama-angukhiye ama-Amazon, ukusuka kwimbono ye-SEO kunye ne-ecommerce yorhwebo yorhwebo, ngaba ngaba "zifutshane" iipropati eziphambili zezinto ezithengiswayo okanye ubudlelwane balo ngokubanzi kumgangatho wemveliso. Amagama angundoqo afanelekileyo ayingxenye ebaluleke kakhulu ekuhlunguleni uluhlu lwemveliso kwi-Amazon product search.
Amagama angundoqo ase-Tail - imela ibinzana elithile okanye inqaku elingundoqo elingabonakaliyo abathengi abaphilayo banokuthi bathathe umbuzo wokufuna umkhiqizo kwi-Amazon. Ngokucacileyo, ii-Amazon ezinomsila wegama eliqhelekileyo zidibaniso zegama eliqhelekileyo ezisetyenziselwa ukukhangela kwemveliso rhoqo. Enyanisweni, ngokukodwa olu hlobo lwamagama angundoqo lenza into ejikeleze i-70% yeziphumo zophando ezenziwe ngabathengi abaphilayo ngaphaya kwalo.
Yingakho kubaluleke nakakhulu ukuchonga intsebenziswano yexesha elide lokufuna uphando oluchaphazelekayo kwintengiso yakho okanye intengiso yezinto. Ngaloo ndlela, uya kuba nethuba elingcono lokuboniswa kwabaphulaphuli abanzi abathengi abakukhangela iimveliso ezinikwe ngentengiso ngaphezu koko. Phakathi kwabanye, ndincoma ukusebenzisa izixhobo zokuphanda ngegama elingundoqo, ngokukodwa ukulungiswa kweso satifikethi se-ecommerce.
Amazwi omthengisi - isilungiso esihle sokuqalisa ukuphanda ngegama eliphambili kwi-Amazon, ukufumana uncediso oluninzi lweengcebiso ezinokubaluleka kwexesha elide, ezithatha ngqo ukusuka phezulu abathengisi kwi-niche yakho okanye udidi lwemveliso.
I-Jungle Scout - yintengiso enye-ntengiso kuyo yonke intengiso ye-intanethi.Ngaphandle kwenkcazelo yegama elingundoqo, i-Jungle Scout yabonisa ukuba luncedo kakhulu xa kufikelele ekufuneni amathuba emveliso emitsha, okanye imfuneko yokufumana ingcamango ebalulekileyo yokuncintisana ngokubalulekayo - zombini kwimveliso enenzuzo, kunye negama eliqhelekileyo elingumsila. idibaniso eziyimfuneko ukuba zibekwe.